व्यवसायीक जीवनबाट बिदा लिएपछि ज्याक मा शिक्षक बन्ने ! - Safal Stories
Home Safal's Columns Safal News व्यवसायीक जीवनबाट बिदा लिएपछि ज्याक मा शिक्षक बन्ने !
व्यवसायीक जीवनबाट बिदा लिएपछि ज्याक मा शिक्षक बन्ने !
ज्याक सन् २०२० मा ग्रुपको वार्षिक शेयरहोल्डर बैठकसम्म बोर्डमा कायम रहनेछन् । व्यवसायिक जीवनबाट विश्राम लिएपछि उनले शिक्षक बन्ने निर्णय गरेका छन् । एक अन्तर्वार्तामा उनले आफ्नो लागि अब सीइओ बन्नुभन्दा शिक्षक बन्नु राम्रो भएको बताएका छन् ।
Previousजागिरको लागि रिजुम ( सी.भी ) बनाउँदा गर्न नहुने गल्ती
Nextतपाईंको समस्या , हाम्रो सुझाव – १४